ဝက်အူဖုန်စုပ် Pump စက်ရုံ, ပေးသွင်း - တရုတ်ဝက်အူဖုန်စုပ် Pump ထုတ်လုပ်သူများ
JSP ဝက်အူလေဟာနယ်စုပ်စက်နည်းပညာအဆင့်မြင့်ခြောက်သွေ့တဲ့ type ကိုလေဟာနယ်ပန့်များတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစျေးကွက်တောင်းဆိုမှုများအတိုင်းငါတို့ကုမ္ပဏီ၏လွတ်လပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည်။ အဆိုပါဝက်အူလေဟာနယ်စုပ်စက်အတွက်ချောဆီအရည်ကြည်သို့မဟုတ်ရေတံဆိပျရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကတည်းကစုပ်စက်အခန်းထဲကရေနံမပါဘဲလုံးဝဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဝက်အူလေဟာနယ်စုပ်စက်အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သန့်ရှင်းတဲ့လေဟာနယ်နှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အရည်ပျော်ပစ္စည်းပြန်လည်နာလန်ထူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တောင်းဆိုနေပြီဖြစ်သော, အဆီမီးကွန်ဒတ်တာအတွက်အခါသမယတုနှိုင်းလို့မရနိုင်တဲ့အားသာချက်ရှိပါတယ်။
2. pump ကျောင်းအုပ်ကြီး
ဝက်အူအမျိုးအစားလေဟာနယ်စုပ်စက်ကိုလည်းခြောက်သွေ့တဲ့ဝက်အူလေဟာနယ်စုပ်စက်အဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါဟာမြန်နှုန်းမြင့်အတွက် running အဆက်အသွယ်နှစ်ခု screw နှစ်ခုမရှိဘဲ synchronous တန်ပြန်လှည့်အကြားကွက်အောင်ဂီယာဂီယာ၏အားသာချက်ကြာပါသည်။ ဒါဟာအစအဆင့်ဆင့်၏ဗဟုဖွဲ့စည်း, အလိမ် groove ခွဲခြားရန်အစုပ်စက် shell ကိုနှင့်အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏အလိမ်အသုံးပြုသည်။ ဓာတ်ငွေ့တန်းတူချန်နယ် (Cylinder ပုံစံနှင့်တန်းတူစေး) တွင်လွှဲပြောင်း, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမချုံ့ခြင်း, ဝက်အူကိုသာ helical ဖွဲ့စည်းပုံမှာဓာတ်ငွေ့အပေါ်ထားတဲ့ compression အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖိအား gradient ကိုဖိအားခြားနားချက်လူစုခွဲခြင်းနှင့်ဖိအားအချိုးတိုးမြှင့်ဖို့သုံးနိုငျသောဝက်အူ, သားအပေါင်းတို့အဆင့်ဆင့်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းလင်းရေးနှင့်လှည့်မြန်နှုန်းပုစုပ်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအပေါ်ကြီးစွာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာဒီဇိုင်း (ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုဓာတ်ငွေ့များဖုန်မှုန့်များ၏ထုတ်ယူအဖြစ်) ကိုဝက်အူဝန်ကြီးဌာနများ, ချဲ့ထွင်မှု, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စည်းဝေးပွဲကိုတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏ကွာဟချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ စုပ်စက်၏ဤကြင်နာအမြစ်လေဟာနယ်စုပ်စက်ကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမအိပ်ဇောအဆို့ရှင်ရှိပါတယ်။ သင့်လျော်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဝက်အူသွား-shaped အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါလျှင်၎င်းသည်ထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူပါလိမ့်မည်, မြင့်စက်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဟန်ချက်ညီရန်လွယ်ကူရယူပါ။
တစ်ဦး။ အဆိုပါစုပ်စက်လိုင်အတွက်အဘယ်သူမျှမဆီ, လေဟာနယ်စနစ်အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှု, ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်မား။
ခ။ အဆိုပါစုပ်စက်လိုင်အတွက်အဘယ်သူမျှမကရေနံ, ရေနံ emulsification နှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်အရည်မကြာခဏအစားထိုး၏ပြဿနာများ, မကြာခဏပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အသုံးပြု. ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖြေရှင်း။
က c ။ အပူပိုင်းပြေးမရှိစွန့်ပစ်ဆီသို့မဟုတ်ရေနံအငွေ့, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ, ရေနံသယံဇာတများကို save လုပ်ပါ။
ဃ။ ရေငွေ့နှင့်ဓာတ်ငွေ့မြေမှုန့်၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏနှင့်အတူ pumped နိုင်ပါသည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းလည်းမီးလောင်လွယ်ခြင်းနှင့်ပေါက်ကွဲနှင့်ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်ငွေ့ pumped နိုင်ပါသည်။
အီး။ အဆုံးစွန်ဖိအားအလတ်စားနှင့်အနိမ့်လေဟာနယ်များအတွက်သင့်လျော်သော 5pa မှရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာရေနံမပါဘဲတစ်ဦးအလတ်စားလေဟာနယ်ယူနစ်သို့အမြစ်များကိုပန့်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး, ဒါမှမဟုတ်ရေနံမရှိဘဲမြင့်မားတဲ့လေဟာနယ်ယူနစ်သို့မော်လီကျူးပန့်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးနိုင်ပါသည်။
f ။ Anti-ချေးအပေါ်ယံပိုင်းကုသပြီးနောက်ကြောင့်ထရန်စဖော်မာ, ဆေးဝါး, ပေါင်းခံ, ခြောက်သွေ့ခြင်း, ဓာတုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အခြားသင့်လျော်သောအခါသမယအတွက် degassing များအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်။
4. Applications ကို
တစ်ဦး။ လျှပ်စစ်: Transformer, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် inductors, epoxy ဗဓေလသစ်လေဟာနယ်သတ္တုများပုံသွန်း, လေဟာနယ်ရေနံနှစ်မြှုပ်ခြင်းက Capacitor, လေဟာနယ်ဖိအား impregnation ။
ခ။ စက်မှုမီးဖိုထဲလေဟာနယ် brazing, လေဟာနယ် sintering, လေဟာနယ် annealing, လေဟာနယ်ဓာတ်ငွေ့သတ်။
က c ။ လေဟာနယ်အပေါ်ယံပိုင်း: စသည်တို့ကိုလေဟာနယ်ရေငွေ့ပျံအပေါ်ယံပိုင်း, အပေါ်ယံပိုင်း sputtering လေဟာနယ်မဂ္ဂနက်ထရွန်, စဉ်ဆက်မပြတ်အပေါ်ယံပိုင်းအကွေ့အကောက်များသောရုပ်ရှင်, အိုင်းအပေါ်ယံပိုင်း,
ဃ။ သတ္တုဗေဒ: အထူးသံမဏိရောစပ်, လေဟာနယ်သော induction မီးဖို, လေဟာနယ် desulfurization, degassing ။
အီး။ လေကြောင်း: အအာကာသယာဉ်ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်း module တစ်ခုတပ်ဆင်ထားအာကာသ, ဆေးတောင့်ထံသို့ပြန်လာ, ဒုံးပျံသဘောထားကိုညှိနှိုင်းမှုရာထူး, အာကာသဝတ်စုံ, အာကာသယာဉ်မှူးဆေးတောင့်အာကာသလေယာဉ်နှင့်အခြားလေဟာနယ်ခြင်း simulation စမ်းသပ်ချက်။
f ။ ခြောက်သွေ့: ဖိအားလွှဲနည်းလမ်းလေဟာနယ်ခြောက်သွေ့, ရေနံဆီဓာတ်ငွေ့ box ကိုခြောက်သွေ့, သစ်သားခြောက်သွေ့နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အေးခဲခြောက်သွေ့။
ဆ။ ဓာတုနှင့်ဆေးဝါးထုတ်ကုန်: ပေါင်းခံ, ခြောက်သွေ့, degassing, ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, etc
အလိုအလျောက် Beverage ဖြစက်, လေဟာနယ်စက် Pack, လူမီနီယမ်သတ္တုဖုန်စုပ် Pack စက်, လေဟာနယ် Pack စက်,